Fakana an-keriny :: Efa azo koa ny naman’i Lamà iray • AoRaha
Fakana an-keriny Efa azo koa ny naman’i Lamà iray
Nalain’ny zandary, tany Ambohimanjaka-Ambodiriana, any Moramanga, tamin’ny alin’ny 3 jona lasa teo, ny lehilahy iray antsoina hoe Rôrô, voatondro ho isan’ireo mpikambana ao anatin’ny tambajotran’ny mpanao fakàna an-keriny. Nokarohin’ny zandary misahana ny heloka bevava eny Fiadanana izy taorian’ny fahatrarana an’i Lamà sy ny ekipany, andro maromaro lasa izay.
Fantatra fa nandray anjara tamin’ny fakàna an-keriny an’ireo Karàna roa lahy, tamin’ny 13 desambra 2019 sy tamin’ny 27 avrily farany teo, ity Rôrô ity, araka ny voalazan’ ireo zandary misahana ny heloka bevava. « Tamin’ny fakàna an-keriny niseho, ny volana desambra 2019, dia izy no niandry sy niantoka ny fiambenana an’ireo mpaka an-keriny teo am-pisamborana an’ilay Karàna. Izy ihany koa no nanisy vato ny arabe nanakana ny fiaran’ilay Karàna, nandritra ny trangana fakàna an-keriny farany teo », hoy ny loharanombaovao akaiky ny mpanao famotorana.
Ireo naman’i Lamà efa voasambotra sy naiditra am-ponja vonjimaika ihany no nanonona ny anaran’i Rôrô tamin’ireo mpanao famotorana. Natolotra ny Fampanoavana, tamin’ny alatsinainy lasa teo, izy ary naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy. Olona roa hafa no karohina fatratra hatramin’izao, mbola voalaza ho raindahiny amin’ny fakàna an-keriny sy niaraka tamin’i Lamà.
Fanafihana teny Ambohidratrimo :: Olona roa maty nifampitifitra tamin’ny zandary
Fitaterana an-tsokosoko :: Olona roa ambin’ny folo niafina tao anaty kamiao